War Deg Deg Ah: 12 qof oo lagu diley weerar IS ku qaadey Baarlamaanka Dowladda Iran - Wargane News
Home Somali News War Deg Deg Ah: 12 qof oo lagu diley weerar IS ku...
War Deg Deg Ah: 12 qof oo lagu diley weerar IS ku qaadey Baarlamaanka Dowladda Iran
Afar nin oo hubeysan ayaa maanta oo Arbaca weerar ku qaadey Baarlamaanka dowladda Iran ee magaalada Tehran, sidoo kale waxay weerar ku qaadeen xarunta Mausoleum of Ruhollah Khomeini. Ragga hubeysan ayaa soo gashey dharka haweenka iyaga oo hubkoodi hoos ku soo qarsadey.
Kooxda Dad ka badan 12 qof ayaa geeridooda la xaqiijiyey waxaana dhaawacmey 30 kale.
Wararka ka soo baxaya ayaa ah kuwo kala duwan waxaana wararka qaar sheegayaan in mid kamid ah kuwa weerarka soo qaadey uu xirnaa Bom isla markaana is qarxiyey.
ku qaadey ayaa gudaha u galay Baarlamaanka oo uu markaas ka socdey kalfadhi, waxaana ay bilaabeen in ay toogtaan cidkasta oo ka hortimaada.
Weerarka labaad ayaa ka dhacay xarunta lagu maamuso odayga dhisey Dowladda Iran ee hadda Ayatollah Ruhollah Khomeinis oo ay degan yihiin qoyskiisi ee loo yaqaan Khomeinis mausoleum ayaa waxaa ka dhacay weerar ismiidaamin ah.
Kooxda isku magacaabta dowladda Islaamka ee IS/Daacish ayaa soo dirtey Video ay ku qaadanayso masuuliyadda weerarkan.
Weerarada caynkan oo kale ah ayaan looga baran in ay ka dhacaan dalka Iran.
Somaliland: House speaker meets Kenya’s Foreign Minister
Somaliland: Wasiirka Madaxtooyada Oo Imika Xil Cusub Magcaabay Oo Afhayeenki Lagu Kharijiyey